Ice Cream - Shiinaha Shandong Gangting Dianche
Min.Order Tirada: 1Piece / Cadad
To regularly increase the management program by virtue from the rule of "sincerely, good religion and high quality are the base of enterprise development", we greatly absorb the essence of linked products internationally, and constantly produce new goods to satisfy the calls for of shoppers for Tricyclye Cuntada gaariyo , Hot Dog Iibinta Cart , Iibinta Mobile Cart , Your inquiry might be extremely welcomed plus a win-win prosperous development are what we've been expecting.
Detail Cream Ice:
Size ka baxsan (mm)
Ogol yahay ugu badnaan load
ahama + Counertop
Jiko Gas MFT
Gubi Single (gaaska)
Dego (fauce korontada + baaldi double)
solay lagu dubo
audio baabuur oo tayo sare leh (Gudoomiyaha double)
Shiraac, Lightbox, Strip LED
1, baabuurta iibka cuntada.
waxaa lagu qori karaa in soo jiidashada dalxiiska, xarumaha dheeldheel, jidadka nool, suuqyada habeenkii, suuqyada, dugsiyada, warshadaha, wadada lugta ah, meelaha la deggan yahay.
2. baabuurta bandhig Ganacsiga.
Khusayso in uu soo bandhigo iyo baayacmushtarkaaga, armaajooyinka, gaarsiinta express, tigidhada bakhtiyaa, hantida maguurtada ah iyo bandhigyo kale oo ganacsi.
3, miro iyo baabuur iibka cuntada.
9m2 jirka weyn iyo meel lagu kaydiyo, dhammaan noocyada kala duwan ee khudaarta iyo miraha caadi ku raran yihiin, furan taagan bandhig-laabanto, "0" sale fog. 5 layers of armaajo shelf mobile la biraha in la biloowday karaa hal riix a.
4, baabuur studio sawir.
Khusayso in studio sawir arooska, adeegyada habboon, ciddiyaha timaha, waxbarashada iyo mashaariic kale oo ganacsi.
Khusayso in ay u safraan, kaambada, muuqaal dabiici ah, hotel iyo mashaariic kale firaaqada.
Waa yar yar, laba-wheel ama afar-wheel cagaf ah oo aan haysan awood iyo wuxuu noqon karaa caadadiisu-dhigay iyo multi-ujeedada.
Gaariga taayir nool ama ku safraya, gaar ahaan ciidaha, ay ku jiraan sariiraha iyo qalabka wax lagu karsado oo la rujin karo by baabuur.
Macaamiisha kasta oo daryeel ah oo ku saabsan adeega-iibiso ka dib, sidaas darteed waxaan ka mid ah:
1. Machine The helo hal sano damaanad.
2. Factory sahayda si toos ah: tayada lagu kalsoonaan karo iyo bixinta si degdeg ah.
3. Inta lagu jiro wakhtiga, Haddii mishiinka heli dhibaataysan waxaan hanuunin doonaa in aad dhibaatooyinka ka qabtaan.
4. adeegyada Customized
Waxaan astaysto gaariga cuntada mobile sida ay shuruudaha, sida wax, size, midabka, rinjiga, logo, iwm aad
5. Ilaalinta Payment 100%
Haddii aad bixiso dhex Ali Trade Hubinta, via credit card ama T / T, waxaad bixinaysaa in Alibaba marka hore, ka dibna waxaan sameeyo iyo samatabbixin, Ali bixin doonaa noo kaliya marka aad xaqiijin on your heshiis elektaroonik ah in ayaa helay alaabta, ama Ali lacagta dib laguugu soo diri doonaa.
Taasi waa wixii loo ballanqaaday. Oo waxaan raadineynaa qaybiyaha wanaagsan ee dalka, si dhibaatooyinka kor ku xusan, waa la xalin doonaa ka badan waqtigii .Oo waxaan rajadii dib markii tijaabiyey mishiinka halkan qaadan kartaa a iskaashiga ganacsi wanaagsan.
Baabuurta Cuntada: Laga soo bilaabo qaab si Rikoorka
Ma Media Social ay muhiim u tahay Food Truck Success?
Ice customizable Cram Cart
Cuntada Ice Cream Cart
Ice Cream la shiilay Trailer Cart
Shiilay Ice Cream Iibinta gaariyo
Fry Ice Cream Trailer Fudud
Si loosoo celiyo gacanta Ice Cram Cart
Tayada Sare ee Ice Cream Mobile Cart
Gaariyo Cream Ice Waayo Sale
Ice Cream Cuntada Cart
Ice Cream Cuntada Trailer
Ice Cream Dukaan yar
Ice cream Dukaan yar Cart
Ice Cream Dukaan yar Waayo Sale
Ice ka murugeeysan dib Cream Cart
Ice Cream bishkleetiga
Baabuurta Cream Ice
Ice Cream Baabuurta Waayo, Sale
Ice Cream Iibinta Baaskiilka
Cream Ice Iibinta Cart
Mobile shiilay Ice Cream Cart
Trailer Mobile shiilay Ice Cream
Style New Cream Ice Cart
Gaysto Ice Cream gaariyo
Iibiyo Ice Cream Baaskiilka
lagu iibiyo Ice cream Cart
Cream Ice midabo
U jecel baabuurka
Ice Crean Maqaaxi